Xiisadaha u Dhaxeeya Falastiiniyiinta iyo Yuhuudda oo sii xoogaystay – Radio Daljir
Xiisadaha u Dhaxeeya Falastiiniyiinta iyo Yuhuudda oo sii xoogaystay
Oktoobar 10, 2015 5:37 b 0
Sabti, Oktoobar 10, 2015 (Daljir) — Kooxo hubeysan oo Falastiiniyiin ah ayaa qeybta ay israiil maamusho ee Marinka Qaza gantaallo ku tuuray saacado kaddib markii ciidamada Yahuudda ay dileen lix qof oo Falastiiniyiin ah.
Ciidamada Israa’iil waxay tilmaameen in madaafiicda ay ku dheceen dhul bannaan, ayna farriimo digniino ah bixiyeen oo ay u dhawaaqeen dadka Yuhuuda ee deggan meelaha u dhow dhulka la haysto.
Jimcihii ciidamada israa’iil waxay sheegeen in askartooda ay rasaas ku fureen dhanka xuduudda si ay ukala ceyriyaan boqollaal qof oo dhagxaan ku tuurayay taayiro la gubayna u garaangerinayay dhanka askarta Yahuudda.
Madaxa Xamaas Ismail Haniyeh, waxa uu sheegay in kacdoonku uu soo socday, ayna sii wadi doonaan wuxuuna ciidamada Yuhuuda ku eedeeyey iney si macno daro ah u leynayaan dadka Falastiiniyiinta ah.
Xiisadaha hadda sii kordhaya ayaa ku bilowday weeraro dhowr ah oo ka dhacay magaalada Qudus maalmihii la soo dhaafay iyo Israa’iil oo Falastiiniyiinta u diiday inay galaan dhulka qadiimiga ah ee magaalada.
Dhowr qof oo Yuhuud ayaa maalmihii la soo dhaafay si gaadmo ah loogu dilay dhulka la heysto, waxaana ka mid ahaa haweeney iyo seygeeda oo meydkooda laga helay gaari ay wateen.
Puntland oo laga Samaynayo Roob Doon Isniinta